Pele Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Sababta Kala Duwanaanshaha Messi Ee Marka Uu Barcelona Iyo Argentina U Ciyaarayoä – Cayaaraha dunida
Falanqeynta | By admin
Pele Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Sababta Kala Duwanaanshaha Messi Ee Marka Uu Barcelona Iyo Argentina U Ciyaarayoä
Halyaygii hore ee xulka qaranka Brazil ee Pele ayaa aaminsan in aanu Lionel Messi wali halkii ugu saraysay ka gaadhin xulka qarankiisa Argentina marka loo barbar dhigo wax uu ka sameeyay kooxdiisa Barcelona.
Xidigan afarta jeer ee isku xigta ku guulyastay abaal marinta shaqsiga ah ee ugu qaalinsa ee Ballon d’Or-ka ayaa Barcelona ka caawiyay inay ku guulaysato lix koob oo horyaalka La Ligaha ah iyada oo xili ciyaareedkana ka mid ah kooxaha ugu cad cad inay hanato, wuxuuna sidoo kale Barca ka caawiyay inay saddex koob oo Champion leaque-ga ah ku guulaysato laakiin Messi ayaa markii uu ugu fiicnaa xulka qarankiisa Argtintina ku hogaaminay inay soo gaadho finalka Koobka aduunka.
Messi ayaa da’yarta Argenitna kula guulaystay koobka Olympic-da sanadihii 2005 iyo 2008 laakiin xulka qarankiiisa La Albiceleste ayaanu wali guulihii laga filayay gaadhsiin.Argentina ayaa sanadkan 2015 ugu cad cad xulalka qaramada Latin America ee ku tartami doona Copa America 2015 oo lagu qaban doono dalka Chile.
Pele oo Messi ka hadlaya ayaa yidhi: “Marka uu Messi Spain joogo ee uu Barcelona ka ciyaarayo, waa meel uu si fiican u fahansan yahay oo uu si fiican u yaqaano markaa waa ciyaartoy, laakiin marka uu Argentina yimaado kooxdu la mid ma aha kooxdiisa Barcelona. Waxay kooxdu u ciyaaraysaa qaab ka duwan qaabkii Barcelona, kooxda Argentina uma habaysna qaab la mid ah kooxdiisa Barcelona. Arintan oo kale waxay ku dhacdaa Neymar marka uu Brazil ka ciyaarayo”.
Intaa kadib ayuu Pepe kalsooni ka muujiyay in koobka Copa America ee xagaaga soo socda lagu qaban doono Chile inuu soo jiidan doono daawadayaal badan oo aduunka ah isaga oo sheegay in ciyaartoyda caanka ahi ay suurtogal doonaan.
Pepe ayaa yidhi: “Baryahan danbe ciyaartoyda ayaa ka caansan kooxaha xulalka qaramadooda, waxayna noqon doonaan xidigo Copa America ah taasna shaki kuma jiro. Baryahan danbe kubbada cagtu saadalin malaha ma sheegi kartid cida koobka ku guulaysan karta”.
Halyeey Zidane Oo Xaqiijiyay In Real Madrid Ay Isha Ku Heyso Xaalada Raheem Sterling .